Indawo enhle yokuhlala yedolobha ibhilide amakamelo okulala ama-3
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Sally
Indlu enhle yedolobha enezitezi ezi-3 ethokomele eduze kwesiteshi sesitimela kanye nokujikijela amatshe ukusuka eNorwich City football stadium, Indawo ekahle yokuhlala ngenkathi uhlola iNorwich yomlando emangalisayo.
Indlu ingeyakho yonke enamagumbi okulala ama-3 abekwe kahle kanye namagumbi okugeza angu-2 ikhishi elihlome kahle kanye nendawo evulekile yegceke ukuze uhlale ngaphandle udle i-alfresco.
Ukupaka kwemvume yamahhala yemoto engu-1 kodwa singakunikeza ezi-2 uma sizicela
Kunomkhawulo wobude bokungena endaweni yokupaka futhi lokhu kungamamitha angu-2.1
Kukhona indawo yokupaka endaweni kanye ne-WIFI ene-smart TV.
Indlu ihlotshiswe ngomuzwa wesimanje kodwa othokomele futhi akukho okukodwa kodwa okugeza oku-2 okucwilisa usuku.
Amakamelo okulala angaphezulu kwezitezi ezi-2 kanti igumbi lokulala eliphakeme elisezingeni eliphezulu linendawo yalo yokugezela yangasese eneshawa phezu kokugeza kanye nombhede ongusayizi wenkosi onamashidi kakotini ahlanzekile.
Igumbi lokulala lesibili linemibhede engamawele noma uma licelwa lingenziwa njengenkosi enkulu
I-Bedroom 3 inombhede wosuku olulodwa futhi kukhona negumbi lokugezela kulesi sitezi
Phansi kukhona ikhishi elihlomele kahle nendawo yokuphumula kanye nendlu yangasese ehlukene
5.0(47 okushiwo abanye)
Vala indawo enhle eseceleni komfula ene-cinema kanye ne-cuisine ukuze uhlinzekele konke ukunambitheka
Idolobha linezitolo eziningi ezizimele ezifanelana nomthengi oshiseka kakhulu.
I-Norwich Castle, manje eyimnyuziyamu kanye negalari yobuciko iyindawo enhle ongayivakashela eyakhiwa amaNorman njengesigodlo sasebukhosini eminyakeni engu-900 edlule futhi enye yezindawo ezidume kakhulu zedolobha.
I-Norwich Cathedral iyabonakala ngaphandle kwamafasitela angaphezulu abekwe endaweni enhle ye-oasis yezizathu.
bahlanganyele etiyetha njengoba benikeza uchungechunge oluphumayo lwemidlalo yomdanso, i-opera, amahlaya namakhonsathi unyaka wonke.
Uma ungumlandeli webhola lezinyawo khona-ke inkundla yebhola lezinyawo yaseNorwich City ibheke le ndlu futhi lokhu kungaba yindlela enhle yokujabulela uhambo lomndeni lokuya ebholeni kanye nazo zonke izinto ezijabulisayo zaseNorwich.
Ngizobe ngiseduze uma udinga noma yiluphi usizo kodwa ngizoshiya isisefo sokhiye ukuze ukwazi ukuzivumela ukuba ungene ngesikhathi esivumelana nawe.
Ngiyajabula ukuthatha izingcingo futhi ngizohlinzeka ngemininingwane yami yokuxhumana
USally Ungumbungazi ovelele